I-Talblick 2-ikhaya lakho kumbindi wentlambo ye-idyllic
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTobias
Ikhaya leeholide linethafa kunye nendawo enengca engama-300m2 yasimahla yokuba wena kunye nabantwana bakho nibaleke nijikeleze, nikhempise, niphumle, nigcobe kwindawo echongiweyo yebarbecue ... nokunye okuninzi.
Ikhaya leeholide lichukumisa zonke iimfuno ezisisiseko, kubandakanywa nendawo yekhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo. Yonwabela isidlo sakusasa sakho kusasa ngqo kwithafa eliphambi kwendawo yokuhlala. Indawo yokulala ifaneleke ngokukodwa kwiintsapho ngokubulela kwindawo yokulala eyahlukileyo enebhedi enkulu yabantwana.
Embindini wentlambo yaseThalwinkel, ikhaya leeholide likufuphi nehlathi, phakathi kwentaba kunye nombono ophefumulayo wendalo. Iziko le-Bibra embi kunye ne-pool yokuzonwabisa "i-Balison" inokufikelelwa ngeenyawo kwi-5-10 imizuzu emva kwenduli. Iindlela ezininzi zokuhamba ngeenyawo kunye neebhayisekile ziqala kanye ngaphandle komnyango wangaphambili. Ikhaya leeholide linethafa kunye nendawo enengca engama-300m2 yasimahla yokuba wena kunye nabantwana bakho nibaleke nijikeleze, nikhempise, niphumle, nigcobe kwindawo echongiweyo yebarbecue ... nokunye okuninzi.
Imozulu epholileyo ephilisayo, amadlelo amnandi entaba, intlango edumileyo: eyakhiwe ngummandla wogcino lwendalo "Finne-Triasland", idolophu eneminyaka eli-1230 ubudala yaseBad Bibra - indawo eyayisakuba yifashoni yeeDukes zaseSaxony-Weißenfels. Umbindi wohambo lokuya eNaumburg, Eckartsberga, Nebra naseMemleben. Ke ngoko, esi sisiqalo esisembindini sohambo lwemini.
Indawo yokuphumla yemozulu kunye nemidlalo yendalo ibonelela ngeendwendwe zayo uluhlu olubanzi lwemidlalo, i-adventure kunye nolonwabo ehlotyeni nasebusika. Apho intliziyo yeHarz foothills ibetha khona, unokosuleleka ngokukhawuleza nangokulula kukuphila okuchwayitileyo kwalo mmandla weholide udlamkileyo.
Ndifumaneka ngefowuni nanini na
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bad Bibra